Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): February 2011
By ဦးသန်းလွင်ထွန်း, တနင်္ဂနွေ, 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2011, ဗွီအိုအေ
ဒီတပတ် မြန်မာ့အရေး ဒီမိုကရေစီရေးကဏ္ဍမှာ နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ပအို့ဝ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှုးကြီး ဦးခွန်ဥက္ကာ ကို နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားများ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးသန်းလွင်ထွန်း က ဆက်သွယ်မေးမြန်း သုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်။
By HTET AUNG Friday, February 25, 2011
ဘန်ကောက်မြို့တွင် ပအိုဝ်းအဖွဲ့များစုပေါင်း၍ ပအိုဝ်းအမျိုးသားဓာတ်ပုံပြပွဲ ကျင်းပ
By နောင်ခမ်းခါ | ၂၂ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၁၁၊ အင်္ဂါနေ့ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပအိုဝ်းအဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်း၍ “ပညာရေးဖြင့် ပအိုဝ်းလူမျိုးများကို မြင့်တင်ကြစို့” အမည်ရှိ ပအိုဝ်းအမျိုးသားဓာတ်ပုံပြပွဲ တစ်ရပ်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့၌ ထဲုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
By SAW YAN NAING Monday, February 21, 2011, Irrawaddy
A newly founded ethnic alliance has vowed to strive foragenuine federal union in Burma while agreeing to support one another should Burmese government forces launchamilitary campaign against one of the ethnic allies.
၁၂-၁၆ ရက်နေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ဖနိဒါ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္စျိမ) ။ ။ စစ်အစိုးရ ဖိအားများကို စုပေါင်းကာကွယ်ရန်အတွက် အပစ်ရပ်နှင့် အပစ်မရပ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့ပါဝင်သည့် “ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ” ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
ဧရာဝတီ Tuesday, 15 February 2011
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီ-ကော့ကရိတ် ကားလမ်းကို ဖြတ်တောက်မည့် စစ်ဆင်ရေး ရှိသည့်အတွက် ယနေ့မှစ၍ အရပ်သားများ ခရီးသွားလာခြင်း မပြုလုပ်ရန် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) က သတိပေး ပြောကြား ထားသည်။
Reports of atrocities committed by Burmese soldiers against 'convict porters' destroy any slim hopes that the shift toa'civilian political system' will somehow dilute the military's absolute power.
Bangkok Post, Newspaper section: Spectrum, Published: 13/02/2011
Aung isasmall man, barely out of his teens. He shifts his bruised body, unable to sit or to find comfort or peace of mind. He's full of half-spoken questions. Aung's scared he might be sent back to Burma, where he was forced to work for the army after being jailed.
ဝေါ်လေနှင့် ဖလူးတိုက်ပွဲ နှစ်ဖက် ထိခိုက်သေဆုံးမှုစာရင်း DKBA ထုတ်ပြန်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ရက်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
Junta PM Elected as Burma's First 'Civilian' President
By BA KAUNG | Friday, February 4, 2011 | Irrawaddy
Burma's lawmakers elected the junta's outgoing prime minister, ex-Gen Thein Sein, as the president of the new government on Friday, making it clear that the political transition has had little impact on the country's entrenched military rule.
OSLO | Wed Feb 2, 2011 11:32am EST
(Reuters) - Anti-secrecy website WikiLeaks has been nominated for the 2011 Nobel Peace Prize, the Norwegian politician behind the proposal said on Wednesday,aday after the deadline for nominations expired.
The Norwegian Nobel Committee accepts nominations for what many consider as the world's top accolade until February 1, although the five panel members have until the end of the month to make their own proposals.